Strategy maka 5 nkeji ọnụọgụ abụọ nhọrọ Chrysalis
Isi > Atụmatụ > Atụmatụ maka ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ 5
Atụmatụ maka ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ 5
01.11.2017 · 1 · Ntinye niile maka November 2017
Onye ọ bụla ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ chọrọ ịba ụba ya. Na obere oge ọ na-ewe iji tinye ego na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, ọnụọgụgụ zuru oke site n'ịzụ ahịa. Usoro maka ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ nke 5 Chrysalis c iji usoro nyocha nke aka na-edozi nsogbu a. Mụta nkọwa zuru ezu site na nhazi nke usoro maka nnwere onwe ma malite ahia ahịa na onye ọ bụla na-ere ahịa ugbu a ...
Strategy maka 5 nkeji ọnụọgụ abụọ nhọrọ Chrysalis.
Strategy maka 5 nkeji ọnụọgụ abụọ nhọrọ Chrysalis - hazie template.
Strategy maka 5 nkeji ọnụọgụ abụọ nhọrọ Chrysalis - iwu ahia.
Ndị na-egosi ihe ngosi maka nhọrọ UP.
Ndị na-egosi akara maka nhọrọ aka.
Maka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, e mepụtara ọtụtụ ụzọ ntanetị iji nyochaa njedebe nke akụ. Na nchịkọta atụmatụ, ị nwere ike ịchọta ụzọ maka kpọmkwem ihe akụ na ọnọdụ na oge ahia. Otú ọ dị, n'etiti usoro e nwere ụzọ ole na ole n'ime ụwa niile na-enye ohere ka onye na-etinye ego na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ọ bụla. Nke a na-eme atụmatụ zuru ụwa ọnụ bụ ngwaahịa dị oke egwu.
Taa, anyị na-ewetara gị ịzụ ahịa nke Chrysalis. Ọ na-enwe ike inyocha nyocha ọ bụla nke ego niile n'emeghị ya. Nke a bụ n'ihi iji ihe ndị ọkachamara na ndị dị elu. Edere na usoro ahụ na-ebute amụma amụma ziri ezi maka nhọrọ ọnụọgụ abụọ.
Strategy maka 5 nkeji ọnụọgụ abụọ nhọrọ Chrysalis - ọnọdụ template
Ụdị na-arụ ọrụ nke usoro "Chrysalis" mejupụtara ngosipụta nke njirimara. Ọ na-agụnye ngwaọrụ iji nyochaa ndepụta dịgasị iche nke njirimara ndị ahịa nke ahịa. Iji wuo ntinye dị mkpa maka usoro ahụ, wụnye nhazi oge ọrụ dị otú ahụ ụdị ndepụta nke ọrụ:
Ọwa Donchian na-egosi. Ngwá ọrụ a maka ịba ụba ọwa dị na chaa chaa chaa na-arụ ọrụ algorithm dị mma maka ịgbakọ ihe ngosi achọrọ. N'ezie, nke a bụ ụdị ọhụrụ nke amara amara nke Bollinger Wave. Ma usoro nke ịmepụta ọnụọgụ ego na ọnọdụ a na-enye gị ohere ịchọpụta nke ọma na azụmaahịa azụmaahịa na-agbanwe azụ ahịa. A na-eji akara a n'ime usoro ahụ dị ka isi ihe maka ịmepụta akara maka ịzụ ahịa.
Ntughari EMA ugboro abụọ bụ ọkachamara ọkachamara maka ịchọta ihe omume. Na nke a, a na-eji ya dịka ngwá ọrụ nke ịchọpụta mgbanwe ọkpụkpụ na obere oge. Ọrụ ya na ọrụ ọrụ ọhụụ na-enye gị ohere inweta akara ngosi kachasị aha maka ndebanye aha ọnụahịa.
Ahịa Detrended Oscillator gosiri - ngwá ọrụ iji chọpụta ego ọnụahịa na ọkwa nke ntụgharị nke okwu ndị dị mkpa iji melite arụmọrụ nke usoro nke usoro. Na nke a, a na-eji ngwaọrụ a dịka ihe ntanetịaka maka nyocha ụgha nke isi ngwaọrụ.
Iji rụọ ọrụ n'ụzọ dị irè dịka iwu nke usoro ahụ, guzobe usoro nke egosi maka oge nke oge M1.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na ịnakwere njirimara ahịa, a na-eji ngwá ọrụ ịkọ amụma na-abụghị ndị ọkọlọtọ. A pụghị iji ha rụọ ọrụ ozugbo na nkwụsị maka nhọrọ ahịa. Ya mere, na atụmatụ a, anyị na-akwado iji ọrụ ọrụ ntanetị pụrụ iche tradingview.com iji wuo template usoro. N'ebe a, enwere ohere ịnweta ihe niile dị mkpa maka ọrụ ntanetị nke atụmatụ na nkọwa nke ịba ego nke ihe ọ bụla nwere ego maka ahia. Iduzi nyocha na ntanetị na enyemaka nke atọ nwere ike ịgbasawanye ohere nke itinye usoro a maka azụmahịa ọ bụla banyere azụmahịa ọnụọgụ abụọ.
Strategy maka 5 nkeji ọnụọgụ abụọ nhọrọ Chrysalis - iwu ahia
Ndị na-egosi ihe ngosi maka nhọrọ UP
Ọnụahịa nke ihe onwunwe na MMA EMA abụọ kwụsịrị na etiti nke ihe ngosi Donchian Channels.
Ịga Oscillator Ahịa a na-emekarị emeela ka ọ kwụsịrị nrịgo efu nke ọnụ ọgụgụ elu.
Ndị na-egosi maka ihe ngosi maka nhọrọ aka
Ọnụahịa nke akụnụba na Mgbagharị Ema abụọ na-agbagharị gbutuo etiti nke ọwa Donchian ahụ.
Ịga Oscillator Ahịa a na-emekarị emeela ka ọ kwụsịrị nrịgo efu nke ọnụ ọgụgụ ala.
Usoro a bụ ụzọ pụrụ iche maka azụmahịa ahịa na mgbapụta nke 5 nkeji. A ghaghị iji oge a gafere mgbe ị na-ere ahịa na nkeji oge nke oge ọrụ. Ma enweghi ike ikpo usoro a n'ozuzu ma oburu na o gaghi ekwe omume igbanwe oge onu ahia. Ya mere, ọ bụrụ na ị gbanwee akara ngosi ahụ, oge elere anya, gbakọọ oge nhọrọ mgbapụta dịka iwu nke oge kandụl ise. Nke ahụ bụ, njedebe kachasị mma ga-abụ oge nke na eserese na oge ọ bụla oge 5 ahịa kandụl guzobere.
A na-ebelata ndị na-egosi nkwụsị dị na usoro atụmatụ ahia site na iji nkwekọrịta nwere uru mbụ. Ọ bụrụ na isi ụlọ ahịa ahụ nwere nnukwu olu, ị nwere ike itinye ọnụego ya na ihe ngosi ego maka 5% nke oke ego.
Akwadoro brokers maka atụmatụ ahia
Usoro a ga - egosi nsonaazụ dị mma mgbe ị na - ere ahịa na ndị na - ere ahịa
nwere ugbua ahia ugbua;
nye ohere iji nwalee ọnụọgụgụ na obere;
enweghi nsogbu na iwepu ego;
Ihe ndị a na-ezute site na ndị na - ere ahịa - ndị isi nke ụma anyị:
Atụmatụ ego maka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ Ejection
Ntuziaka dị mfe maka ọnụọgụ abụọ nhọrọ EMA 200
A mfe atụmatụ maka ọnụọgụ abụọ ...
3 atụmatụ kandụl maka ọnụọgụ abụọ ...
Data na enweghị ọrụ dị ka eji na ahia nke ọnụọgụ abụọ nhọrọ
Ngwa enweghị ọrụ dị ka ...
Trading breakouts etoju
Nkọwapụ ahịa azụmahịa 2.8 (56%) Nkọwa 5 ...
Usoro maka ọnụọgụ abụọ nhọrọ maka 60 sekọnd bụ ihe ọhụrụ nke 2018
Atụmatụ maka ọnụọgụ abụọ nhọrọ na 60 ...
Mkparịta ụka: nwere okwu 1
Usoro ahụ na-arụ ọrụ n'ezie. Naanị mwepu bụ na ọ dị mkpa ka ị ṅa ntị nke ọma ma ọ na-esi ike ahia karịa oge 2. Ma nkwụnye ego ahụ gbasasịrị na ya. M na-eti Bimo na mbụ, ma ugbu a, m na-ejikarị ya eme ihe. Ana m enye onye ọ bụla ndụmọdụ!
Ntụle bụ isi na November 11
Robots maka ahia na nhọrọ ọnụọgụ abụọ